DEG DEG: DF Somalia oo war rasmi ah kasoo saartay xadgudubka Faransiiska | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: DF Somalia oo war rasmi ah kasoo saartay xadgudubka Faransiiska
(Muqdisho) 29 Oktoobar 2020 – DF Somalia ayaa ka mid noqotay dalalkii ugu dambeeyey ee Muslim ah oo war kasoo saara xadgudubka loo gaystey Nabigeenna Muxamed (NNKH).
War rasmi ah oo Madaxtooyada kasoo baxay ayaa lagu yiri sidatan:
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada iyo muqdasaadka dadka Muslimiinta ah oo uu ugu horreeyo Suubanaheenna Nabi Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyada oo marmarsiyo laga dhiganayo xorriyadda hadalka.
“Waxay adduunydu isla ogoshahay in la dhawro Muqadasaadka diiniga ah, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u taabanaya diinteenna sharafta badan ee Islaamka.
“Fal kasta oo dhaawacaya dareenka dadka Muslimiinta ah wuxuu u adeegayaa danaha kooxaha xagjirka ah, waxaana habboon in laga fogaado ficilladan oo kale maadaama ay abuurayaan nacayb bulsho oo ka dhex dhasha shucuubta caalamka ee kala aaminsan aragtiyada iyo diimaha kala duwan.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku boorrinaysaa hoggaamiyeyaasha caalamka in ay si taxadar leh uga fiirsadaan hadallada xadgudubka ku ah dareenka dadka Muslimiinta ah iyaga oo kala saaraya xorriydda hadalka iyo ku xadgudubka muqadasaadka diiniga ah.”
Previous articleTOOS u daawo: Juventus vs Barcelona, Man United vs RB Leipzig, Club Brugge vs SS Lazio
Next articleHalka lagu qabtay munaasabaddii xil wareejinta Wasaaradda Isboortiga oo arrin aan la ogayn kashiftay